SMS Tracker v.3.121 APK (Message spy လုပ်ချင်သူများအတွက်) - .::just for share::.
Home » android » SMS Tracker » SMS Tracker v.3.121 APK (Message spy လုပ်ချင်သူများအတွက်)
SMS Tracker v.3.121 APK (Message spy လုပ်ချင်သူများအတွက်)
ဥပမာ ကိုယ့်ကို မသိတဲ့သူက စာပို့ လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ သူကဘယ်သူကြီးလဲ၊ ဘယ်ကလာတာလဲဆိုတာကို
သိချင်ရင် အခုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဆော့ဝ်လ်နဲ့ ခြေရာခံတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ မေလ ၁၃ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင် ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Thanks to Min Soe Yar Sar
Labels: android, SMS Tracker